www.camaloow.com - News: Madaxweynaha Galmudug oo safar Qarsoodi ah ku jooga Magaalada Garowe ee xarunta Puntland.......................
November 17 2018 15:37:32
Madaxweynaha Galmudug oo safar Qarsoodi ah ku jooga Magaalada Garowe ee xarunta Puntland.......................
<?php </a> Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle “Xaaf” ayaa safar Qarsoodi ah laba maalmood ku jooga magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland sida ay noo xaqiijiyeen Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay.
Xaaf ayaa laba Maalmood ka hor diyaarad gaar ah ka raacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug waxaana la socda Ciidamo aan abdneen dhowr qof oo ka mid ah xogheyntiisa gaar ahaan dad ay Ehel yihiin Xaaf.
Si rasmi ah looma oga socdaalka Madaxweyne Xaaf balse warar ay heshay KNN ayaa sheegay inuu la kulmay Madaxweynaha Puntland C/Wali Maxamed Cali Gaas ayna kawada hadleen Arimaha Galmudug, gaar ahaan Khilaafka u dhaxeeya Labada dhinac ee hogaanka Galmudug.
Wararka aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in Xaaf uu Madaxda Dowlad Gobaleedyada (Golaha Iskaashiga Dowlad Gobaleedyada ) ka dalbaday iney xaliyaan Khilaafka hogaanka Galmudug ka hor inta aysan soo dhax galin Dowladda Soomaaliya.
Madaxweyne Xaaf ayaa Dowlad Gobaleedyada u sheegay inuusan ku kalsooneen Dowladda Soomaaliya sidaas darteedna uusan ogolaan karin iney dhax-dhaxaadiso Arimaha Galmudug, isagoo sheegay iney dhinac taageersan tahay sida ay noo sheegeen dad ka agdhaw Xaaf.
Wax naadir ah ayey aheyd in hogaamiyo Galmudug ah uu safar ku gaaro Garowe waxaana heshiiska Xaaf iyo Gaas ku nabad helay magaalada Gaalkacyo oo sanado badan marti gelineysay dagaalo sukeeye.
· xassan on June 02 2018 · 0 Comments · 61510 Reads ·
Render time: 0.01 seconds 28,453,100 unique visits